केपी ओलीलाई पत्र- आफूले गर्दा पूण्य, अरुले गर्दा पाप ? | E-Highway News
छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको बिषयलाई लिएर बिभिन्नस्तरमा बिभिन्नखाले क्रियाप्रतिक्रियाहरूको बाढी नै लागिरहेको छ । त्यही प्रसंगमा मैले पनि यस पत्रमार्फत तपाईं समक्ष आफ्नो विचार प्रेषित गरेकी छु ।
शक्तिशाली छिमेकी देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले तपाईंको लोकप्रियता शिखरतिर उकालो लाग्नु पर्ने हो । तर, तपाईं मान्नुस् नमान्नुस् मोदीको नेपाल भ्रमणले तपाईंको लोकप्रियता एकाएक ओह्रालो झरेको छ । देश दुनियाँलाई थाहा छ, तपाईं हिजो लोकप्रियताको शिखरमा मोदीजीकै कारणले पुग्नु भएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, नेपाली इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली शासक पनि मोदीजीकै कारणले बन्नु भएको हो ।
भारतीय शासकहरूको ‘ठुल्दाइ प्रवृत्ति’को कारण नेपाली जनता भारतीय शासकहरूप्रति कहिल्यै सकारात्मक बन्न सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक दुई वर्षअघि यिनै मोदीले मधेसलाई उचालेर नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेपछि नेपाली जनता असन्तुष्ट मात्र होइन आक्रोशित बने । मोदीको अघोषित नाकाबन्दीविरूद्ध तपाईंले लिनुभएको अडान साँच्चै प्रसंशायोग्य थियो । नेपाली जनताले मुक्तकण्ठले तपाईंको प्रसंशा गरे । जनतामा नाकाबन्दीको कारण पैदा भएको आक्रोश तपाईंप्रति विश्वासमा रूपान्तर भयो । फलस्वरूप तपाईं इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नु भयो । मैले मोदीको कारण तपाईंको लोकप्रियता बढ्यो भन्नुको कारण यही हो ।
यी सबै काम गराउन शक्तिशाली राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरुन् । तर, बिडम्बना, तपाईंले जनताले चाहेअनुसार एउटा पनि काम गर्न सक्नु भएन । बरू उल्टो कहिले चटके शैलीमा राजस्थानी पहिरन पहिरिएर जग हसाउनु भयो त कहिले हिजो आफ्नै पार्टीले राष्ट्रघात हुन्छ भनेर रोकेको अरूण-३ को छापामार शैलीमा संयुक्त शिलान्यास गरेर आफ्नै मन्त्रीपरिषदका मन्त्रीहरूलाई समेत चकित पार्नुभयो ।
अरूण-३ को शिलान्यास राष्ट्रघात हो भनेर म भन्दिनँ । तर, यति ठूलो र दीर्घकालीन महत्व राख्ने प्रोजेक्टको शिलान्यास गर्दा पर्याप्त गृहकार्य गर्नु पर्दैन ? यस्तो प्रोजेक्टको बारेमा जनतालाई सूचित गराउनु पर्दैन ? सुन्दैछु- ‘नेपाल सरकारले यो आयोजनाको लागि भारतीय कम्पनीलाई १० वर्षसम्म १०० प्रतिशत कर छुट दिने साथै, थप ५ वर्षसम्म भारतीय कम्पनीलाई ५० प्रतिशत कर छुट दिने । आयोजनामा काम गर्ने सबै जनशक्ति भारतीय कम्पनीले भारतबाटै ल्याउने, आयोजनाको लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामाग्रीहरू भारतबाटै ल्याउने र त्यसको ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने ।’
के यो सत्य हो ? नेपाली जनता सत्य थाहा पाउन चाहन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, यदि यो कुरा सत्य हो भने तपाईंले अरूण-३ शिलान्यास गरेर राष्ट्रघात नै गर्नु भएको हो । अन्यथा, यस्ता ‘बिग प्रोजेक्ट’ हरू राष्ट्रिय हितलाई शिरमा राखी निश्चित समयावधिको लागि उसैले सन्चालन गर्न पाउने गरी विदेशी कम्पनीहरूलाई बनाउन दिने प्रचलन छ ।
रिसानी माफ गर्नुहोला प्रधानमन्त्रीज्यू । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले मोदीलाई भेटेको र त्यसबेला घुँडा टेक्न गएको भनेको भन्दै प्रश्न गर्ने आज आफूले गर्दा पूण्य, अरुले गर्दा पाप ?
भारतसँगको सम्बन्ध ‘न संघर्ष, न समर्पण’ भन्दा बीपी कोइरालालाई हटाउन राजा महेन्द्रले भारतलाई चिठ्ठी लेखेका थिए, चाहे समृद्धिको सवालमा होस्, चाहे छिमेकीहरूसँग गरिने सम्बन्धको सवालमा । हिजो बाबुरामले बिप्पा गर्दै गर्दा बाह्र हात उफ्रेर बिरोध गर्नेको पंक्तिमा तपाईंको पार्टी पनि थियो । छिमेकीहरूसँग सन्तुलित र कुटनीतिक सम्बन्ध बनाउनु पर्छ भन्ने बाबुरामलाई र अन्य नेताहरुलाई राष्ट्रघाती भारतीय दलाल भन्दै नारा लगाउने तपाईंको पार्टी पनि थियो ।
आखिर आज प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर तपाईं पनि त त्यही गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू, क्षणिक लोकप्रियताको लागि सत्यको गहिराइमा नपुगी सस्तो राजनीति नगर्दा नै राम्रो होला । तपाईं प्रष्ट हुनुहोला । कालोलाई कालो र सेतोलाई सेतो भन्ने एक सचेत नागरिक हुँ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू ! मेरा थप केही असन्तुष्टि र आशंकाहरू पनि छन् । सायद यो मेरो मात्र होइन, अधिकांश नेपालीहरूको असन्तुष्टि र आशंका हो । नागरिक अभिनन्दनको क्रममा २ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री लालबाबू राउतले नेपालको संविधान विभेदकारी भएकाले यसका बिरूद्धमा आफूहरू संघर्षमा रहेको कुरा गरेर खुलेआम हस्तक्षेपको लागि मोदीलाई गुहारे । के यो सैहृय कुरा हो ? त्यस्तै सम्बोधनको क्रममा राउतले ‘राज्यद्वारा मधेसीप्रति जारी विभेदकारी नीति र पूर्वाग्रह र विद्वेषपूर्ण मानसिकताका कारणले नै मधेसका मानिसहरू तुलनात्मक रूपमा अत्यधिक गरिबी, बेरोजगारी, अभावग्रस्त, शोषित एवं उत्पीडित जीवन जीउन विवश छन्,’ सम्म भन्न भ्याए ।
May 17 2018 04 : 04am । 238
May 17 2018 04 : 01am । 187